Qarax ayaa caawa xiliga afurka ka dib waxaa uu ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho - Magudhe news
Qarax ayaa caawa xiliga afurka ka dib waxaa uu ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho
Qarax ayaa caawa xiliga afurka ka dib waxaa uu ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo qaraxan uu ahaa mid xoogan ayaa daryankiisa laga maqlay meelo badan oo ka tirsan magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan oo ka dhacay agagaarka hotelka Karmel oo ku yaalla wadada isku xirta Isbitaalada Difgeer iyo Banaadir uu ahaa mid gaarigiisa loogu xiray sarkaal ka tirsan milateriga Somalia oo aan magaciisa la ogaanin.
Sarkaalkan oo la socday markii uu gaarigiisu qarxayey ayey wararku sheegayaan inuu ka badbaaday weerarkaas, waxaana ku dhawaacmay inta la og yahay haweeney goobta ka dhoweyd, iyadoo gaariga sarkaalkan uu burbur saoo gaaray.
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa goobta xiray, iyadoo sidoo kale gaadiidka gurmadka deg deg ah ay halkaas gaareen inkastoo khasaaraha qaraxan ka dhashay uu aad u koobnaa.
Qaraxan ayaa ku soo aadaya xili ciidamada xasilinta amniga ay howlgalo culus ka wadaan wadooyinka magaalada Muqdisho kuwasoo lagu xaqiijiyo amaanka caasimada.
Previous PostSaraakiil ka tirsan dowlada Sacuudiga ayaa sheegaya in muwaadiniinta u dhashay Qadar laga mamnuucay gudashada waajibaadka Xajka ee sanadkan.Next PostDowlada Eritreya oo ka mid ah dalalka ku yaalla Geeska Afrika ayaa bedeshay mowqif dhexdhexaadnimo ah oo ay horey uga qaadatay khilaafka ka dhex aloosan xulufada Sacuudiga iyo dowlada Qatar.